Imfuyo esifundeni Moscow: iyiphi ukuthuthukiswa imboni, lapho main Izinkomo zizalela izikhungo?
Ukubheka emashalofini eminyakeni yamuva, singasho ukuthi inani imikhiqizo inyama Russian ezenziwe liye landa ngokuphawulekayo. Lena into omuhle, ngoba ngaphambi isabelo esikhulu emakethe zaba imikhiqizo inyama angaphandle. Kuyathakazelisa ukuthi inani elikhulu imikhiqizo akhiqizwa namadlelo. Kule ndaba, kuhle ukucabangela ngokuningiliziwe imfuyo esifundeni Moscow. Kule ndawo, kukhona ngempela izimo ezikahle zezulu kwemvelo ngoba lolu hlobo lomsebenzi.
esifundeni Ezolimo eMoscow: izici izici
Moscow ubhekwa i esifundeni wezolimo, kusukela cishe ngo-40% insimu yalo ugajwe kule mboni. Yiqiniso, ngeke sikwazi ukusho ukuthi zonke izindawo esifundeni asetshenziswa ngokulinganayo. Ngokwesibonelo, edolobheni eningizimu, ikakhulukazi eningizimu Oka embonini yezolimo ucasha cishe 50% ezweni, okuyinto ebonisa ezinhle kakhulu. Uma sikhuluma ezindaweni ezisenyakatho, balufunda okuningi ngokuncane. I Kungashiwo okufanayo mayelana ezifundeni esempumalanga nengxenye esentshonalanga, esisogwini emaphethelweni endaweni. Ngokwengxenye enkulu, ezolimo ekuthuthukiseni edolobheni.
Isifunda liyaziwa eziningi ezindaweni zokulima. Imfuyo esifundeni Moscow ungumholi. Khona-ke, kuyafaneleka kwezitshalo nekucaphela izikhungo ezinkulu zazo zitholakala ngaseningizimu esifundeni. Ikakhulu esekhulile izitshalo ezifana ukolweni, oats, ibhali, i-rye. Enye ingxenye ebalulekile ukutshalwa isivuno amazambane.
Yiqiniso, udinga ukuba banake imifino, ngoba futhi akuyona indawo yokugcina kwezolimo, esifundeni Moscow kukhona abamba ukushisa eziyinkimbinkimbi enkulu kunayo yonke eYurophu.
Ngokwazi ukuthuthukiswa bemfuyo kule ndawo?
Manje sekuyisikhathi sokuba ucabange nje kuphela izitshalo kodwa futhi imfuyo esifundeni Moscow. Kuphephile ukusho ukuthi endaweni eMoscow bemfuyo evelele kakhulu ngokuhamba isivuno. Imikhiqizo eyinhloko enikeza isizinda - iyona inyama nobisi.
Endaweni kukhona ezifuywa izinkomo, izinyoni, njengama-izinkukhu, kanye nezinye izilwane. Pig kwezolimo esifundeni Moscow nayo kakhulu athuthukile.
Kubalulekile wazi ukuthi ezolimo uye wahlupheka buhlungu abalulekile kule nhlekelele owenzeka ngo-1990. Lokhu igalelo esiyitholayo manje, kusukela cishe zonke embonini imfuyo esifundeni Moscow baye bahluleka ubuyele amazinga eyedlule. Abaningi ezweni owawukade esetshenziswa njengoba izindawo kwezitshalo kanye namadlelo, sebehoxisiwe ekubeni kwegazi, okuyinto has a kunethonya elibi emsebenzini okhiqizwayo izibalo.
Okuncane ukukhiqizwa ingulube esifundeni
Lokhu kuthambekela kuyinto ejwayelekile. Porcine - zu imfuyo umkhakha, eye yokuzalanisa izingulube. Direction inezidingo okusezingeni eliphezulu, ezingeni ezinhle ukusebenza, kanye namandla value elikhulu mikhiqizo.
Ngokuthakazelisayo, labantu Russian ibusa ngonyaka mayelana 2 amathani ayizigidi ezingu-inyama yengulube, ngokusho kwabanye imithombo nakakhulu. Pig kwezolimo esifundeni Moscow kusekelwe ezingxenyeni eziningi esifundeni. Zohlobo ofanele kakhulu yokuzalela kulesi simo sezulu - omhlophe omkhulu. Lolu hlobo zithandwa kakhulu eRussia, ngoba ngokuphelele bazivumelanisa sezulu kanye nokuncelisa izimo. ngabanye futhi babe izinga lokuzala laliphakeme kakhulu nezinye izimfanelo eziningi ezinhle.
Izinkukhu esifundeni Moscow: yini imikhiqizo akhiqizwa?
Kuwufanele ukhulume isiqondiso esibaluleke kangaka njengoba izinkukhu. Esifundeni Moscow ezihlukahlukene ifektri amapulazi, okuyinto bafakela inqwaba imikhiqizo emashalofini. Izinkukhu - kule ndawo kwezolimo, okuyinto ngokukhethekile ukukhiqizwa amaqanda nezinkukhu inyama. imikhiqizo engeziwe umkhakha iyona izimpaphe inyoni droppings, ngenkuthalo esetshenziswa njengendlela nomanyolo for izitshalo ezahlukene.
Elikhulu kunawo wonke izinkukhu amapulazi eduze eMoscow
Imisebenzi esifundeni njengoba inqwaba izinkukhu amapulazi amakhulu bese amapulazi amaningi amancane. Ngo yesimanje izinkukhu amapulazi ukuze ukushintsha izinqubo eziningi, ethuthukisa kakhulu ukusebenza kwabo.
Omunye izitshalo athandwa kakhulu ukwenziwa yenkukhu - a eziyinkimbinkimbi "Elinar Broiler", esemgwaqweni entshonalanga nesifunda eMoscow. Izinkukhu ipulazi ukhiqiza ingxenye enkulu imikhiqizo olunikezwe yi inyama, amaqanda, kanye imikhiqizo Semi-siphelile. Enye umkhiqizi enkulu inkukhu inyama namaqanda - Petelinskaya, okuyinto Itholakala Odintsovo wesifunda.
Fish ukulima edolobheni
E-Moscow futhi usebenza embonini ezifana nezinhlanzi ukulima. Ngakho-ke, singaphetha ngokuthi kule ndawo, hhayi ukuthuthukiswa imfuyo kuphela. Esifundeni Moscow kukhona amapulazi izinhlanzi ezinkulu eziningana ukuthi unikeze izinhlanzi hhayi kuphela e-dolobha kodwa nakwezinye izifunda. Elikhulu kunawo wonke izikhungo izinhlanzi ukulima zitholakala ezindaweni eziningana: endaweni Egorievsk ku Tsninsky amachibi, ku Odintsovo wesifunda e Nara amachibi nasesikhathini Noginsk wesifunda ku Biserovskih yabulala namachibi ezinhlanzi. Fish ipulazi "Biserova" ngonyaka uyabanikeza emakethe amathani 800 kuya 1000 carp. Ngaphezu "Biserova", izinkampani ezincane kanye naphakathi mayelana 100 kokunikeza carp ku izimakethe eMoscow.
Futhi e Moscow, lapho Fisheries Institute, waziphatha ukuzalela inhlanzi. Itholakala ku Dmitrov wesifunda, edolobhaneni Fish.
Nokho, kukhona umkhakha encane inhlanzi ukulima, okuyinto athuthukile okwamanje kahle, - a trout. Kuphela trout izinhlanzi ipulazi "gangway" Yakhiwa ngaphambi kokuqala kwempi.
Njengoba amageja ukuhamba-ngemuva? Indlela alime igeja tillers kwesokudla?
Hamburg izinkukhu: incazelo kanye nokubuyekeza
Tifo letibangwa onion. Kanjani hhayi ukulahlekelwa sokuvuna?
U-Immanuel Kant - ngukhokho nefilosofi German classical
Ukwakhiwa kwe-marmalade. Yini eyenziwa i-jellyfish?
Manicure Usuku Valentine sika (Photo)
Indlela ukupheka isobho - izeluleko kusuka abawongoti abapheki
Indlela sikhule ngo-anyanisi engadini ekhishini futhi ekhaya
Burdock Ishiya: izici zohlelo lokusebenza, libuyekeza yi
Simple face buso ka namaqhubu
Umdlavuza ne-Capricorn. abalingani Ihambisana emshadweni
Amakati Burmese ukuzalela: ubunjalo nezithombe
Entsha i-Windows 8: Indlela 'Seven' kuphela best!
Antihistamine Iningi 4 izizukulwane